Ruo ugbu a, ndị ọrụ ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya na ha butere ọrịa na ọrụ ahụ. Mana steeti iri na isii na-atụle ugbu a itinye ibu ọrụ n'ụlọ ọgwụ: Mee ka ọ gosi na onye ọrụ ahụ enwetaghị ọrịa ahụ n'ọrụ.
Otu n'ime ọtụtụ ihe na-eme ka ọrịa coronavirus 2019 (COVID-19) siri ike ịgwọ bụ na mmadụ enweghị ike ịkọwa kpọmkwem ebe ma ọ bụ otu mmadụ nwere ike isi nweta ọrịa ahụ. Ndị ọrụ ahụike nwetala COVID-19 (yana ezinụlọ nke ndị ọrụ ahụike ndị nwụrụ ọrịa ahụ) na-achọpụta na ịnwa ị nweta ndị ọrụ nkwụghachi ụgwọ elele ma ọ bụ uru ọnwụ nwere ike ịbụ ihe agaghị ekwe omume, Kaiser Health News (KHN) na-akọ taa.
Ruo ugbu a, ndị ọrụ ahụ ga-ekwenye n'ụzọ doro anya na ha butere ọrịa na ọrụ ahụ, ọ bụghị esemokwu dị mfe iji merie n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-ebu ọrịa na-enweghị atụ na obodo.
Ugbu a, dị ka KHN si kwuo, obodo 16 na Puerto Rico chọrọ itinye ụlọ ọgwụ ahụ: mee ka ọ gosi na onye ọrụ ahụ enwetaghị ọrịa ahụ na ọrụ.
"Bgwọ dị iche na ndị ọrụ ha na-akwụ ụgwọ," ka akụkọ KHN na-akọ. “Somefọdụ na-echekwa ndị niile hapụrụ ụlọ ka ha rụọ ọrụ n’oge a na-enye ha iwu ịnọ n’ụlọ. Ndị ọzọ na-ejedebe na ndị na-aza ajụjụ mbụ na ndị ọrụ ahụike. Fọdụ ga-ekpuchi naanị ndị ọrụ ha na-arịa ọrịa n'oge ọnọdụ mberede, ebe ndị ọzọ ga-arụ ọrụ ogologo oge. ”
Ọnọdụ dị iche iche na-agbaso ụzọ dị iche iche, ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ahụ na-emegidekwa ụlọ ọgwụ na mkpakọrịta azụmahịa. KHN kwupụtara ụgwọ na New Jersey nke na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ dị mkpa nwetara COVID-19 n'oge ọnọdụ mberede iji gosipụta na ha nwetara ya n'ọrụ.
Chrissy Buteas bụ onye isi ndị ọrụ gọọmentị maka New Jersey Business & Industry Association, nke na-emegide iwu ahụ, nke ndị Senate steeti nyefere ma na-echere na General Assembly. "Nchegbu anyị bụ n'ụzọ bụ isi na ọnụ ahịa nkwupụta ndị a nwere ike ịbawanye usoro ahụ, nke na-emeghị iji kwado azịza n'oge a zuru ụwa ọnụ," ka Buteas na-ekwu.
KHN na-elekwa anya na ikpe na Virginia nke onye enyemaka dọkịta (PA) nke na-enye nyocha COVID ka a nọrọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ rịara ọrịa ahụ maka otu izu, wee merụọ izu ise ọrụ.
PA jụrụ ka dejupụta ụdị akwụ ụgwọ ndị ọrụ. A jụrụ ya fọm ndị ahụ wee hapụ ya ka ụbọchị ise gachara, were ụgwọ ụlọ ọgwụ $ 60,000. Attorney Attorney Michele Lewane na-anọchite anya PA n'okwu ahụ. Dabere na KHN: “Lewane kwuru na iwu na Virginia ga-ele COVID-19 anya dị ka 'ọrịa nkịtị nke ndụ,' dị ka oyi na flu. O kwuru na ya ga-egosi site na "ihe doro anya ma doo anya na-egosi" na ọ na-ejide coronavirus na-arụ ọrụ. ”